चिहान खन्दा भेटियो २१ सय वर्ष पुरानो 'आइफोन!' - Everest Dainik - News from Nepal
चिहान खन्दा भेटियो २१ सय वर्ष पुरानो ‘आइफोन!’
मस्को, मानवशास्त्रीहरुको एक दलले रुसको स्वायत्त राज्य टुभामा उत्खनन गर्ने क्रममा हातमा आइफोन समातेको नरकङ्काल फेला पारेका छन् । उक्त नरकङ्काल लगभग २१ सय वर्षअघिको बताइन्छ ।
सुन्दा अचम्म लाग्नु अस्वभाविक हैन, किनभने आइफोन सार्वजनिक भएको भर्खर केही वर्ष पुग्दैछ । उक्त नरकङ्कालसँग एप्पलको आइफोन नभएर दुरुस्त उस्तै देखिने वस्तु रहेको उक्त खोजीकार्यमा संलग्नहरुले बताए ।
टाइम्स नाउले प्रकाशित गरेको समाचारमा उत्खननका क्रममा चिहानभित्र फेला परेको उक्त वस्तु ‘नताशा’ नाम गरेकी एउटी सुन्दरीको चिहानमा फेला परेको हो । मानवशास्त्रीहरुका अनुसार उनी प्राचीन मङ्गोलियाको झिङ्गनु या हुण कालकी हुन् । उनको समय ई.पू. तेस्रो शताब्दी मानिएको छ ।
समाचारहरूमा उल्लेख भए अनुसार उक्त वस्तु ठ्याक्कै स्मार्टफोन जस्तो रहेको छ। शोधकर्ताहरूले हेर्दा आइफोन जस्तो देखिने उक्त वस्तु कम्मरपेटीको बकल हुनसक्ने बताइएको छ। आइफोनजस्तै स्वरूपको उक्त वस्तु मूल्यवान पत्थरले बनेको र त्यसमा अन्य मूल्यवान पत्थर समेत जडेर आकर्षक बनाइएको समाचारमा उल्लेख छ। उक्त वस्तुमा फिरोजा र मोतीजस्ता बहुमूल्य रत्न जडिएको बताइन्छ।
आइफोनभन्दा सस्तो या महँगो ?
पत्थरले बनेको उक्त वस्तुको प्रचीनताले यसको मूल्य निकै बढी हुने यस क्षेत्रका विशेषज्ञ बताउँछन्। एक जनाले भने, यो वस्तु नयाँ नै भएको भएपनि यसमा जडिएका बहुमूल्य रत्नहरूका कारण यो आइफोनको कुनै पनि मोडेलको तुलनामा निकै महँगो हुने थियो। ”
‘नताशा’लाई झिङ्ग्नु कालको आइफोनसँगै गाडिनुलाई पुरातत्त्वविदहरूले अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरेका छन्। “यो यस क्षेत्रका चिहानहरूमा चिनियाँ वुझु सिक्काहरू जडिएको कम्मरपेटीसँगै गाडिएको एक मात्र शव हो। यसले हामीलाई यसको काल निर्धारण गर्न निकै सजिलो भयो। ” पुरातत्त्वविद डा पावेल लेयसले बताए।
विज्ञहरूका अनुसार यी प्राचीन महिलाले बहुमूल्य रत्नजडित कामरपेटी लाउने गर्थिन र यो आइफोनजस्तै बकल भएको पेटी तीमध्येकै एक हुनुपर्छ। उक्त नरकंकाल एटलान्टिस श्मसान घाट उत्खनन गर्ने क्रममा फेला परेको हो। यो मसानघाट वर्षका धेरै दिन ५६ फीटसम्म गहिरो पानीमा डुब्ने गर्छ। गर्मी यामका केही दिन मात्र देखा पर्ने उक्त ठाउँमा रहेका चिहानहरू खोतलेर इतिहास खोज्ने काम भैरहेको छ।
“यो क्षेत्र वैज्ञानिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ, हामीले धनी हुण फिरन्तेहरूका चिहान फेला पारेका छौं, यो निकै ठुलो उपलब्धि हो। यी चिहान प्राचीनकालका चिहान लुटेराहरूका नजरमा पर्न पाएनन् .” सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्स्तित्युत अफ मटेरियल हिस्ट्री एण्ड कल्चरकी डा मारिना किलुनोभस्काया ले भनिन्।